बर्षा शिवाकोटीको स्टाटसमा बर्षा राउतको कमेन्ट: सबै कुकुरको दिन आउछ ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodबर्षा शिवाकोटीको स्टाटसमा बर्षा राउतको कमेन्ट: सबै कुकुरको दिन आउछ !
शुक्रबारबाट प्रर्द्शनमा आएको फिल्म ‘बीर विक्रम २’की अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी प्राय: फिल्म नचल्ने भएका कारण उनको अभिनयमा औंला उठाइने गरिन्छ । यसैबिचमा रिलिज भएको उनको अर्को फिल्म हो ‘बीर विक्रम २ ‘ भखरैमात्र बर्षाले सामाजिक सन्जाल फेसबूक मार्फत एउटा स्टाटस लेखेकी छिन ।
जसमा उनले ‘अरु को कुभलो चिताएर मै खाउ र मै लाउ भन्नेहरुलाई कुनै दिन कर्मले पक्कै पनि पिरोल्छ । सायद आनन्दको निन्द्रा पक्कै लाग्दैन । मान्छेलाई छले नि भगवानलाई छल्न पक्कै सकिन्न । रोइ कराइ गरेर हिडेको सुन्न नपरोस जय ‘विर बिक्रम २’ भनेर लेखेकी छिन ।
जसको कमेन्टमा बर्षा राउतले ‘सबै कुकुरको दिन आउछ । अरुको नराम्रो सोचेर पक्कै कसैलाई राम्रो हुदैन् । साथी म तिमीसंगै छु । आज ‘बीर विक्रम २’ हेर्न जाने सोचेको छु । किन हामी सँगै नजाने । भनेर लेखेकी छिन । ‘
बर्षा शिवाकोटीको त्यो स्टाटस उनका आलोचकहरुको लागि हो भन्ने प्रश्टै बुझन सकिन्छ तर बर्षा राउतले सबै कुकुरको दिन आउछ भनेर कसलाई कुकुर भनेकी हुन त ? कतै बर्षा राउतका लागि बर्षा शिवाकोटी कुकुर त हैनिन ?
lates nepali film